Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) kungenzeka UNGALINGANI kwi-CD | Kusuka kuLinux
Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) KUNGENZEKA ukuthi ilingane kwi-CD
En OMG! Ubuntu Basitshela ngalokhu ... futhi singafunda ngakho ku- I-Launchpad.
Inkinga ukuthi Ubuntu 12.04 kungathatha 750MB, cishe u-50MB ngaphezu kobukhulu obusekelwa yi-CD, futhi isizathu asikho okunye ngaphandle kwalokho engikucabangile okwesikhashana: I-Gtk3 y I-Gnome3.
Kwenzeka ukuthi lawa ma-50MB angavumela ezinye izinhlelo zokusebenza ze-Canonical ukuthi zize ku-ISO, futhi zenze ngcono ukuhlanganiswa nesipiliyoni lapho I-Gnome3 ukhathazekile, Unity njengeShell ye-Gtk3, ehumushela kwikhodi eningi nezandiso eziningi
Yini okufanele abasebenzisi bayenze?
Bangakha i-LiveUSB bese befaka i-ISO besebenzisa i-pendrive, noma (futhi uma ngabe isiphakamiso sokuthi kungabi yi-750MB kuphela, kepha kube yi-1.5GB ISO) bese uyishisa nge-DVD futhi yilokho kuphela.
Noma kunjalo, ngicabanga kanjalo Ubuntu Ngempela ayisakwazi ukufakwa kwi-CD, izolahleka kakhulu ... kepha kakhulu, ngoba (izophinda) ibuyele emuva 🙁
Isikhathi sizotshela igama lokugcina… okwamanje, kufanele silinde futhi sifunde ngakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin) KUNGENZEKA ukuthi ilingane kwi-CD
I-algorithm Isixazululo xD
kulungile angizange ngivale umaki futhi ngasala ne- # $% & # $% & jaojoaojajoa
ngalezo zinto Ubuntu kuzolahlekelwa abasebenzisi kuphela.
Umdlalo wamanqamu we-Eduar2 uzogcina ulungile mayelana
<º Ubuntu, engikushiye kuphawulwe phakathi.
Kokunye ngibona ukuthi kunezizathu eziningi zokungasebenzisi le distro, kahle, iCanoni $ oft, ukubhebhana
Ah woza ungathinti amabhola ami HAHAHAHA !!!! Ukube bekufanele ngibhejwe bengizobheja ukuthi uyakwazisa lokhu okuthunyelwe, kuyiyona ephelele ongayisebenzisa nge-HAHAHA.
Ngendlela efanayo engiphindaphindayo, ngiyakukhumbuza ukuthi kule sayithi ASIKHETHI noma iyiphi i-distro, Ubuntu yi-distro enezinzuzo nobubi bayo, kuzothunyelwa izindaba ezifanele mayelana no-Ubuntu.
I- <° Ubuntu a imane mania kumabhulogi amaningi mbumbulu, okokuqala nje amabhomu bavula ikhalenda ye-Ubuntu futhi sengathi bathinte amaqanda bakwenza ngokwehlukana kubuntu, i-xubuntu, i-edubuntu namanye amakhambi, bese beza nombhedo we ukuthi izobiza kanjani i-buntu eza, bese bephuma nalokho okuzoletha ubuntu "obusha", futhi-ke udaba oluhlukile kubuntu, i-xubuntu nokunye okuhlukile bese kuthi lapho sekusele izinsuku, beze nombhedo "lapho kusele izinsuku ezi-3 ukufika kuka-Ubuntu XX.XX indlwabu yokushaya indlwabu ", futhi nakwezinye eziningi baqalisa cishe into efanayo, kepha kubuntu, xubuntu, njll.
Lapho-ke lapho ekugcineni bekhipha bathi i-distro, Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, mecawenbuntu, njll. bese bechitha amanye amasonto bachaza "izindaba" ababevele bezishilo ngesihloko ukuze bangakhohlwa. Ngenxa yobuhle, inani lezihloko ezivulekayo maqondana no-Ubuntu alinakubekezeleleka futhi alifuneki futhi kuyacaca ukuthi liyacasula, kepha i-bueeee.
Ukuthi kwenziwe i-miniCD, nohlelo selukulungele ukusetshenziswa (ukuthi akukho okumele kulungiselelwe ngumsebenzisi). Futhi ngemuva kokufakwa, ne-boot yokuqala…. ukuthi iskripthi sethula isethulo esihle sesoftware ukufaka (ukulanda) okuyisisekelo (ihhovisi, njll) lapho umsebenzisi kufanele amake futhi amukele kuphela.
Akuyona inkinga enjalo. Njengoba uJose uthi, akubizi lutho ukwenza i-CD yokufaka ekhipha iskripthi esilandelayo esigcwalisa i-OS. Ama-distros amaningi, lapho ethula izinhlobo zawo ezintsha, anikeza ithuba lokulanda i-LiveCD ne-plain OS ekwazi ukulanda ukusebenza okudingekayo ngemuva kwalokho (ngendlela eqondisiwe noma cha), noma ukulanda i-DVD elayishwe kahle ngama-codec, isoftware, izilimi, ama-desktops ahlukile, njll.
Uma inguqulo engu-11.10 no-Unity wayo odumile ungeke ugcine ifenisha (futhi yilokhu okubonakala sengathi kuyenzeka), i-12.04 ingenza ukufuduka kube kubasebenzisi abaningi.
Uyemukelwa (ngokusemthethweni) esizeni 😀
Isilekeleli sokufaka okuthunyelwe asiwona umqondo omubi,… angazi ukuthi kungani singekenziwa okwamanje 0_oU
Akukho lutho, wamukelekile kusayithi 🙂
Hehe ngiyabonga. Njengoba ukwazi ukubona, ngikwazile ukulungisa i-ejenti yomsebenzisi. Ama-tutorials e-elav awangixazululanga ngokuphelele ivoti lami (ngicabanga ukuthi uma usebenzisa i-LMDB kunokungafani okungenakunqotshwa) kodwa banginikeze umbono ocacile wokuthi ngenziwa kanjani, ngakho-ke ngiyabonga futhi!
Cha, lutho, ukufunda nokuphawula. Ukubingelela!
Ngenze okokufundisa okuvela kwaDebian, okuyilokho okusetshenziswa yi-LMDE, futhi bangisebenzele kahle .. Kepha he, ngiyajabula ukuthi uxazulule ngezindlela zakho 😀
"B" ngembongolo, kuzoba njalo. Kwakusho i-LMDE, ukuthi ikhanda licabanga into eyodwa futhi umunwe ucindezela enye.
Well, here you have us for any questions 😉
700, 750, 850 MB, 1,5 GB, iqiniso ...
Yini okubalulekile, uma Ubuntu wasinda ku-Unity ayisafi.
Empeleni, usasokola ukuthola ubumbano… akakaphephile yet
Iqiniso ukuthi lisekela isoftware ephathelene kepha kufanele lenze njenge-linuxmint, enguqulweni yayo engu-1 ye-giga efaka wonke ama-codec okuphathelene.
Ngiyethemba ukuthi inguqulo 12.04 izinzile futhi bayakwazi ukuyinika i-180 degree degree ngokubukeka nemisebenzi.
Ngokufaka nje iGnome 3 ngemisebenzi yayo ngokwakhona, abanye abasebenzisi be-Ubuntu bazobe sebenelisekile. Kuningi ukukhuluma okukhulisayo (nangaphezulu) Ubumbano, kepha angiboni ikusasa lakho.
Sawubona futhi wamukela uJulio 🙂
Akukho lutho, ngokwethembeka iMint ezokwanda ekuthandeni, umbuzo uzoba ... kuzokwenzekani ngeLinux Mint uma Ubuntu iyeka ukuba yiphrojekthi esebenzayo njengoba bekulokhu kuze kube manje? 😀
Leyo Mint izosuselwa enkathini kaDebian
Ngingathanda ukuthi ibe yinguqulo ye-DVD ... kahle, kufanele silinde ukubona ukuthi kwenzekani. 🙂
Ungayifaka kanjani i-Xfce ku-ArchLinux
Itimu ye-Ambiance yeKopete (ENKULU !!!)